Annadif: Soomaalidu waa iney shaqeeyaan ka bixitaanka xaaladda dalku ku jiro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, 1 Luulyo 2014: Ergayga gaarka ee ah Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa AMISOM danjire Mohamet Sllah Annadif ayaa ugu hambalyeeyey dadka Soomaaliyeed maalinta xorriyadda 1-da Luulyo.
“Anigoo ku hadlaya magaca Midowga Afrika, waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa 54-sano guuradii kasoo wareegtay markii ay xorriyadooda heleen, haddana waxaan arkaynaa inay dib u dhalanayso Soomaaliya, taasoo qayb ka noqon doonta baalasha taariikhda Soomaaliya,” ayuu yiri danjire Annadif.
Ergaygu wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay aasasaayaashii Midowga Afrika, waxaana lagu xusuustaa Soomaaliya inay qayb ka qaadatay xorriyaddii ay heleen dalal badan oo Afirkaan ah; caalamkana ay kaalin mug leh ku yeelatay.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan sidii dalkooda uga saari lahaayeen xaaladda uu hadda ku jiro ayna u bedeli lahaayeen muuqaalka uu leeyahay. Sidoo kalena ay xoojiyaan horumarrada la gaaray,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay danjire Annadif oo dhawaan shaqada ka tagaya.
01-dii Luuliyo 1960-kii ayay gobollada Koonfureed ee Soomaaliya ka xoroobeeb gumeytihii Talyaaniga, iyadoo 26-kii June 1960-kii ay iyaguna Ingiriiska xorriyad ka qaateen gumeystihii Ingiiriska, iyadoo labada gobol oo noqday Soomaaliya ay isku biireen 01-dii Luuliyo oo maanta ku beegan.